တွေ့မိမှတ်မိသမျှ: May 2007
Posted by Philip Shield at 10:56 AM5comments:
ယောင်္ကျားလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကိုဒီမိန်းကလေးဟာ ဘယ်လိုလူစားမျိုးပါလိမ့်လို့ မသိသေး တာတောင်မှပဲ ချစ်သွားမိတတ်ကြတယ်။ နှလုံးသားမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစား လို့လဲ ရနိုင်တတ်ကြတယ်။ သူနဲ့တတွဲတွဲ နေလိုစိတ်လဲ ရှိတတ်ကြတယ်။ နောက်တော့၊ တချိန်ချိန်ကျတော့၊ သူမနဲ့ကောင်းကောင်း သိသွားရော၊ သူမကို တကယ်တမ်း ကြိုက်တောင်မကြိုက်ပါလား၊ တကယ်တမ်း စိတ်မ၀င်စားပါလား ဆိုတာ သူ့ဘာသာ ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတတ်ကြပြန်တယ်။ သူမကို ပြင်းထန်စွာ စွဲလမ်းနေသယောင် ဖြစ်နေတုံးကတော့ သူမနားမှာ အတူတူရှိဘို့ ၊ သူမအထင်ကြီးအောင်၊ သူမပျော်ရွှင်ဖို့ ဘာမဆိုလုပ်မယ် ဆိုတဲ့စိတ်မျိုး ဖြစ်နေလေ့ရှိကြတယ်။ နောက်ကြာတော့ အကြောင်းတွေသိသွားတော့ သူ့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုဆိုတဲ့ဟာတွေ၊ ဖီလင်ဆိုတဲ့ဟာတွေဟာ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ ဒါမျိုးကို အင်္ဂလိပ်လို "morning-after syndrome" လို့ခေါ်တယ်၊ မြန်မာလိုတော့ နိုးအိပ်မက် လို့ ဘာသာပြန်ရင် သင့်လိမ့်မယ်။ မနက် မိုးလင်းတဲ့ အခါ အိပ်ရာက မထခင် နိုးတစ်ဝက် အိပ်တစ်ဝက် စိတ်ကူးလေးယဉ်သလိုလို၊ အိပ်မက်လိုလိုကနေ တကယ်နိုးလာတဲ့ အခါ ခံစားရတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို ဆိုလိုချင်ပုံရတယ်။ ယောကျာင်္းတွေရဲ့အမြင်မှာ တရက်ရက်မှာ သူမဟာ အလွန်လှလိုက်တာ၊ ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် တောက်ပနေတယ်လို့ထင်နေပြန်ရော။ နောက်တရက်ရက်ကျပြန်တော့ အမှတ်မဲ့ ကြည့်ပြန်တော့ သူမရဲ့ ခြေချောင်းများဟာ အလွန်ကြီးနေပါလား လို့ထင်နေပြန်ရော။ ဒါနဲ့ပဲ သူ့ရဲ့ အချစ်ဆိုတာတွေ ပျောက်ကွယ်သွားလိုက်ပြန်ရော၊ သူမဟာ သူ့အတွက် မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပြန်ရော၊ လက်ထပ်လိုစိတ် ဆိုတာတွေ ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပြန်ရော။ ယောင်္ကျားဆိုတာက ဒီလိုမျိုး နိမ့်ချည် မြင့်ချည် စိတ်ရှိတတ်တဲ့ အတွက် အဲဒီအခါမျိုမှာ မိန်းကလေးတွေက ဒီလိုစိတ်ကို အထင်လွဲတတ်ပြန်တယ်။ သူ့ရဲ့ အချစ်ကို သံသယ၀င်တတ်တယ်။ ဘယ်လိုလူပါလိမ့်၊ အရင်တုံးကတော့ ချစ်လှချည်ရဲ့ဆို၊ ဟုတ်လဲ မဟုတ်ပဲနဲ့ ကတိတွေပေးထားတာပါလား လို့ တလွဲထင်တတ်ပြန်တယ်။
မိန်းကလေးတွေကျတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါ။ တမျိုးတဖုံဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေဟာ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို ပထမဆုံး စိတ်ဝင်စားမိတဲ့ အချိန်ဟာ သူရဲ့ physical ကစတာ မဟုတ်ပါ။ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို စိတ်ဝင်စားမိပြီဆိုရင် emotion ကစပါတယ်။ mentally နဲ့ကစပါတယ်။ physically စိတ်ဝင်စားတာက နောက်မှ မရှေးမနှောင်းမှ စတင် ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် သူမဟာ ယောင်္ကျား တစ်ယောက်ဟာ သူမအတွက် physically ဆွဲဆောင်မှု စတင် ရှိနေရင်တောင် emotionally ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတယ်လို့ မှားယွင်းစွာ ကောက်ချက်ချလိုက်မိတတ်ပါတယ်။ ယောင်္ကျားလေးကလဲ သူမလိုခံစားရမယ်လို့ သူမထင်နေတတ်တယ်။ ကွဲပြားမှုကို သူမနားမလည်နိုင်ဘူး။ တကယ်တော့ ယောင်္ကျားတွေက physical ကစတယ်။ ယောင်္ကျားတွေမှာကတော့ physically attracted ဖြစ်လေ၊ စဉ်းစားဥာဏ်တွေ မြော်မြင်တတ်တာတွေ နည်းပါးလာတတ်တယ်။ အဲဒီအခါမျိုးတွေမှာ သူမဟာ သူ့အတွက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ the most special woman ပါလား လို့ ပြုမူ ဆက်ဆံတတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကလဲ အခိုက်အတန့်တစ်ခုပါ။ တသက်လုံးဒီလိုပြုမူလိမ့်မယ်လို့ မထင်မိစေပါနဲ့။ ယောင်္ကျားလေးတွေမှာ ဒီလိုမျိုး စိတ်အခြေအနေ၊ ခံစားမှု အတိုးအလျော့ အမျိုးမျိုးရှိတတ်တဲ့ အတွက် ကလည်း မိန်းကလေးတွေက ယောင်္ကျားတွေရဲ့ အချစ်ဆိုတာ တကယ်မဟုတ်ပါလား၊ အပေါ်ယံပါလား လို့ အထင်ရောက်သွားကြပြန်တယ်။ ဒါတွေကို နားလည်ဖို့လိုတယ်။ ယောင်္ကျားလေးတွေရော မိန်းကလေးတွေရော ဒီကွဲပြားတဲ့သဘောလေးကို သိနေတာ ကို understanding လို့ခေါ်ရမလားပဲ။
Dr. John Grey (PH.D) ၏ Mars and Venus မှ Man's Passion vs Woman's Passion ကို ဆီလျှော်အောင်ပြန်ဆိုထားပါသည်။
Posted by Philip Shield at 11:50 PM3comments:
ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းစတက်တော့ အဆောင်က ချက်ခြင်းမရသေးပါ။ ရေကျော်အိမ် မှာ ခတ္တနေရသည်။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် က လှိုင်နယ်မြေ မှာ ဆိုတော့ ၅၀ ကား စီးပြီး သွားရသည်။ တစ်နာရီ ကျော်ကျော်လောက်ကြာသည်။ တစ်ပါတ်လောက်ကြာတော့ အဆောင်ရသည်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်က ကွန်ပျူတာကျောင်းသားတွေ က တဆောင်တည်းတွင်မနေကြရ။ ဒါပေမယ့်အားလုံးတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် Main ထဲမှာ အဆောင်ရသည်။ တစ်ချို့က ဒဂုံဆောင် တွင်၊ တစ်ချို့ က အင်းဝဆောင် တွင်နေခွင့်ရသည်။ ကျွန်တော်က ဒဂုံဆောင်မှာ နေခွင့်ရသည်။ ရောက်ကာစက နှစ်ယောက်တစ်ခန်း မြေညီထပ်မှာ နေရသည်။ ဒုတိယနှစ်ကျတော့ ပထမထပ်မှာနေရသည်။ အဆောင် မှာ နေရသည့်ရက်များသည် ကျွန်တော့်ဘ၀တွင် အပျော်ရွှင်ဆုံး အချိန်များ ဖြစ်ပါသည်။
အဆောင်မှာ က ထုံးစံအတိုင်း ထမင်းဟင်းကတော့ မကောင်း။ ၀က်သားချက်လျှင် အဆီတုံး ၉၀ ရာနှုံး ခန့်ပါသည်။ ရေပေါလောဖြစ်သည်။ ပဲဟင်းဆိုလျှင် ပဲကတခြား ရေကတခြားဖြစ်သည်။ ကန်ဇွန်းရွက်ကြော်ဆိုလျှင် မသင်ပဲ နုတ်နုတ်စဉ်းပြီးကြော်ထားသည်။ ဒါပဲရှိတာဆိုတော့ ဒါပဲ စားကြရသည်။ အပြင်မှာဝယ်စားလျှင် ဈေးကြီးသည်။ အိမ်ကထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ငပိကျော် ငါးခြောက်ကြော် ဖြင့် ရောနှောပြီး လွေးကြရသည်။ စားလို့တော့ကောင်းသွားတာပဲဖြစ်သည်။ တစ်ခါတလေတော့ ပိုက်ဆံနဲနဲရှိလျှင် ထမင်းစားဆောင် ဘေးလေးမှာ ရောင်းသည့် လက်ဖက်သုတ်လေးတွေ၊ အမဲကြော်လေးတွေ၊ ငါးမွှေချက် လေးတွေ နဲ့ စားကြသည်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စားရလို့လားမသိ။ စားလို့တော့ တော်တော် မြိန်သည်။
အဆောင် ရောက်ကာ စက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သိပ်မခင်သေး။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် လည်း အလွန်လေးလေးစားစား ဆက်ဆံကြသည်။ "အကို" ဟုသုံးနှုံးကြသည်။ "အကို က ကွန်ပျူတာကလားခင်ဗျ" စသည်ဖြင့် မိတ်ဆက်ရသည်။ နောက်တော့လည်း ခင်မင်လိုက်ကြသည်မှာ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်တွေ့လျှင် ငါနှင့် ကိုင်တုတ်ကြသည်အထိ ပြောမနာ ဆိုမနာ တွေ ဖြစ်သွားကြသည်။ ရောက်ခါစက ဆက်ဆံပုံတွေ ပြောပြော ပြီးရယ်ကြရသည်။
အဆောင်မှာတုံးက ကိုယ့် အခန်းကို မနေ။ သူများအခန်းတွေ သွားသွားလည်သည်။ အိပ်ခါနီးမှ ကိုယ့်အခန်းကိုယ် ပြန်အိပ်သည်။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ၏ အခန်းဆိုလျှင် လူအလွန်စည်သည်။ စည်မှာ ပေါ့၊ ဖဲဝိုင်းရှိတာကိုး။ စာမေးပွဲ ဝေးတဲ့ ရက်တွေဆိုလျှင် နေ့ရောညရော ဖဲရိုက်ကြသည်။ လူသာလဲသွားသည်။ ဖဲဝိုင်းကမရပ်။ ဖဲထုပ်တွေဆို သုံးရက်လောက်ပဲခံသည်။ ကလဖန်ထိုးပါများပြီး စုတ်စုတ်သွားလို့ဖြစ်သည်။
အဆောင်မှာ ဂစ်တာအတီးကောင်းသည့် သူငယ်ချင်းတွေ ရှိသည်။ ညည ကြလျှင် ကွန်ပျူတာက ကောင်မလေးတွေရှိသည့် ငုဝါဆောင်ကို သွားသွားပြီး သီချင်းဆိုကြသည်။ Main ထဲက နေ သမိုင်းဝင်း ထဲမှာရှိသည့် ငုဝါဆောင်အထိ လမ်းလျှောက်သွားကြသည်။ သီချင်းဖြင့် ရင်ဖွင့်ကြသည်။ မူးကြသည်။ အော်ကြသည်။ ပျော်စရာကြီးဖြစ်သည်။ ငုဝါဆောင်က Hall ပုံစံ ရှည်ရှည်ကြီးဖြစ်သည်။ Container ကြီးနှင့်တူသည်။ ပြူတင်းပေါက်များက ဘေးဘက်မှာရှိသည်။ အဲဒီတုံးက ငုဝါဆောင်ရဲ့ ဘေးဘက်မှာ မြေကြီးပုံကြီးတစ်ပုံရှိသည်။ ပြူတင်းပေါက်များရှိတဲ့ဘက် တဲ့တဲ့ လောက်မှာဖြစ်သည်။ အဲဒီပေါ်က တက်တက်ပြီး အသကုန်အော်ကြ ဆိုကြသည်။ သူငယ်ချင်း ကောင်မလေးတွေကလည်း တော်တော်အားပေးသည်။ သီချင်းစဆိုသည်နှင့်ပြူတင်းပေါက်တွေ တစ်ဝုန်းဝုန်းပိတ်ကြသည်။ အဲဒီလောက် တောင် အားပေးကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ကား ဇွဲမလျှော့။ လုံးဝမမှု။ ဆိုမြဲပင်ဖြစ်သည်။ အမူးလည်းပြေ၊ အသံတွေလည်းဝင်၊ မောလောက်မှ ပြန်ကြသည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က creative အတော်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားရေးရာ ကိုသွားပြီး ကောင်မလေးတွေရဲ့ အဖေနာမည်တွေ ကြည့်ပြီးမှတ်လာခဲ့သည်။ ဒီအကြံမဆိုး။ အဆောင်ရောက်လျှင် ရည်ရွယ်သူ ကောင်မလေး နာမည်တိုက်ရိုက်မပြော။ အဖေနာမည် ဖြင့် ဘယ်သူ့အတွက် ဆိုတာ အော်ပြောသည်။
တစ်ခါတရံ ငယ်ငယ်တုံးက အဆောင်မှာနေတုံးကအဖြစ်အပျက်များကို တော်တော်လွမ်းမိသည်။
Posted by Philip Shield at 4:19 PM No comments:
Customized Google search တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Blackle ကို သုံးစွဲကြပါလျှင် Energy save ဖြစ်သောကြောင့် ကမ္ဘာတ၀ှမ်း တစ်နှစ်လျှင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၇၅၀ မီဂါဝပ် သက်သာ နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့&nbsp; screen က အနက်ရောင်လေ။ Google မှ Google အစစ်ပါ၊ Result တွေက အနက်ရောင်နောက်ခံပေါ်မှာ အဖြူရောင်စာလုံးများနဲ့ ပေါ်တာကလွဲလို့ပေါ့။ ဒီလို အနက်နောက်ခံ အသုံးပြုထားလို့ သိသာလောက်အောင် power-saving ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
Posted by Philip Shield at 11:14 AM 1 comment:
အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ အတူနေဖို့ မလုံလောက်သေးပါဘူး၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်မှုရှိဖို့ ကမရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဆိုးတဲ့အချက်တွေ အားလုံးကို လက်ခံနိုင်မယ်၊ အဲဒါတွေကို ပြင်ခိုင်းဖို့ ဆန္ဒ မရှိဘူး။ လက်ရှိအနေအထား နဲ့ ပဲ သူ့ကို စိတ်ထဲက လေးလေးစားစား ရှိမယ်။ မှီခိုမှုတစ်ခုခု ရှိနေတဲ့ Relationship တွေကလဲ တကယ်တမ်းကျတော့ မကောင်းပါဘူး။
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ချစ်ခြင်း၊ နားလည်ခြင်း၊ လေးစားခြင်း နှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်း တို့နဲ့ အဆုံးသတ်တဲ့ Relationship ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ အမုန်းတရားတွေနဲ့ အဆုံးသတ်တဲ့ Relationship မဖြစ်သင့်ဘူး။ လောကမှာ ဘယ်သူမှ perfect ဖြစ်တဲ့ ပြည့်စုံတဲ့သူမရှိဘူး။ တခါတရံ မှန်ကန်တဲ့ စိတ်ရင်းပေါ်မှာ အခြေပြုမထားတဲ့ Relationship တစ်ခုဟာ တဖြည်းဖြည်း ရှုပ်ထွေးလာစေနိုင်တယ်။
လက်ထပ်ခြင်းကို ပြသနာတစ်ခုဖြေရှင်းဖို့ သက်သက် အသုံးမပြုမိစေပါနှင့်။ ချစ်ခြင်း၊ နားလည်ခြင်း၊ လေးစားအသိအမှတ်ပြုခြင်းတို့ နဲ့သာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပါတ်သက် နေသင့်တယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် တကယ့် စစ်မှန်တဲ့ Relationship မဟုတ်ဘူး။
ချစ်မိတယ်ဆိုတာ အချိန်မရွေး&nbsp; ဖြစ်လို့ရတယ်။ လက်ထပ်ဖို့ လောစရာမလိုပါ။ လူတွေက သမီးရည်းစား ဘ၀မှာတင် ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။
တကယ်ချစ်မချစ် ဆိုတာ သေချာဖို့ ဆိုရင် တဘ၀လုံးကြာချင်ကြာနိုင်တယ်။ ကောက်ရိုးမီး တွေက ကြီးတယ်၊ မြန်မြန်ကုန်တယ်။ ဖွဲမီး တွေဟာ တငွေ့ငွေ့နဲ့ ကြာရှည်ခံ တတ်တယ်။
လက်ထပ်တယ်ဆိုတာက ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အရာမဟုတ်ပါ။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပေးအယူမျှ အဆင်ပြေပြီး လိုက်ဖက်ညီတဲ့စုံတွဲတွေ အများအပြား တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ တစ်ချို့ဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေ တွေအဖြစ်တောင်ဖြစ်နေကြတယ်။ အင်မတန်တော့ ရှားတယ်။
ကိုယ့်ကို တကယ်ဂရုစိုက်တဲ့လူကို တွေ့ဖို့ဆိုတာက အင်မတန် ရှားတယ်။ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲပါ။ အချစ်သက်သက် နဲ့ကတော့ ခိုင်မြဲတဲ့ Relationship ဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်လို့မရဘူး။ နေ၀င်ချိန်တွေကို ကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ နေ၀င်ချိန်ကိုကြည့်ပြီး ကြည်နူးလို့ရတယ်။ နေ၀င်ချိန် လေးကို ဖမ်းဆုပ်ထားလို့တော့ မရဘူးနော်။
လူသာမန် ပုထုဇဉ် တွေမှာ ဘုရားရဟန္တာတွေမှာလို အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ အနန္တမေတ္တာ ဆိုတာမျိုး တော့မရှိပါဘူး။ သာမန်မေတ္တာဓါတ် တော့ရှိပါတယ်။ တကယ့် မေတ္တာ သက်သက် ဆိုရင် သိပ် အေးချမ်းတယ်။ မေတ္တာ သက်သက်ကြောင့် ဘယ်တော့မှ စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတယ် ဆိုတာမရှိဘူး။ စိတ်ညစ်ရတယ်ဆိုတာ က နောက်မှာ ချိတ်ကလေးပါ ပါနေလို့။ တစ်ခုခုကို မျှော်လင့်နေလို့။ မေတ္တာဆိုတာက မျှော်လင့်ချက်လုံးလုံးမပါဘူး။ မေတ္တာမှာ အပေးအယူ မရှိဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်မိပြီး&nbsp; ခံစားရတယ် နာကျင်ရတယ်ဆိုတာ က တုံ့ပြန်မှုကို မျှော်လင့်နေလို့ပါ။
ခံစားမှုတွေဆိုက ဖြစ်လိုက်ပျက်လိုက်၊ လိုအင်ဆန္ဒတွေကလည်း ဖြစ်လိုက်ပျက်လိုက်။ သူသဘောအတိုင်းသူရှိပါစေ။ ထားလိုက်ပါ။ အဲဒါတွေကို serious ဖြစ်ဖို့မလိုပါ။ စောင့်ကြည့်ယုံသက်သက်လေးပဲ။ စိတ်ပျက်ရခြင်း၊ စိတ်ညစ်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းက အဲဒါတွေကို control လုပ်ချင်နေလို့။ ခံစားမှုအတွက် နာကျင်မှုရှိနေတော့ ဒါကို မလွန်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတာ။ နာကျင်မှုကလည်း အဲဒါကို ဇွတ်အတင်း ဆုပ်ကိုင်ထားလို့ဖြစ်နေတာ။
Snow In he Summer (U Jotika)
Posted by Philip Shield at 11:16 AM No comments:
KhunMyaHlaing ၏ "အမှန်တကယ်ကြီးပြင်းလာအောင်ကလေးတွေကိုဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်မလဲ"
KhunMyaHlaing ၏ "အမှန်တကယ်ကြီးပြင်းလာအောင်ကလေးတွေကိုဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်မလဲ" ကိုမျှဝေ ဖတ်ရှုစေလိုသော စေတနာဖြင့် ထပ်ဆင့်ကူးယူဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by Philip Shield at 9:34 AM No comments:
Posted by Philip Shield at 10:01 PM 14 comments:
အားရင် http://mmglite.awardspace.com လေးကို ၀င်စမ်းသုံးကြည့်ပါ့လား။ gmail ရဲ့ lite version လေးပါ။ မြန်မာလို အီးမေးရေးတတ်တဲ့ သူတွေဆိုရင် သုံးလို့အကောင်းသားလားဗျ။ UserName မှာ သင့်ရဲ Gmail username ရိုက်ထည့်၊ Password မှာလည်းသင့်ရဲ့ Gmail Password ကိုရိုက်ထည့် ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်။
mmglite သည် Zawgyi-One Font ကို အသုံးပြုထားကာ glite ကို မြန်မာ GUI ဖြစ်အောင် open source ဖြစ်သော glite ကိုပြုပြင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Attachment ကို ယခု version မှာရရှိနေပါပြီ ။ 2MB attachment ကိုတော့ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ပြသနာများ ၊ အကြံများ ကို saturngod AT gmail.com သို့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်သည်များကို Download Page ( Click Here ) မှရယူနိုင်သည်။ MMGLITE အကြောင်းဆွေးနွေးလိုလျှင် MMGLite Forum ကို လှမ်းလာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်..
Smile Icon စုစုပေါင်း ၅၉၉ခု ထည့်သွင်းထားသည်....
Text Editor Help( Click Here )
Total Visitor : 71927 Visitors
Today Visitor : 115 Visitors
mmglite ၏ နောက်ဆုံးသတင်းများ :
May52007 မြန်မာစာ keymap ထည့်သွင်းထားသည်..
Api 12 2007 ပုံများကို Text Editor တွင် တိုက်ရိုက် upload လုပ်လို့ရပါပြီ
Mar 01 2007 Smile Icon များ e-mail တွင်ပေးပို့နိုင်ပါပြီ...
Feb 11 2007 Image File များကို Mail တွင် ကြည့်ရှု ပေးပို့နိုင်ပါပြီ..
Jan 31 2007 Text Editor တွင် Alt+n ဖြင့် လက်ကွက်ပြောင်းနိုင်ပြီ..
Dec 10 2006 Attachment လက်ခံနိုင်ပါပြီ...
Dec 02 2006 စာရေးရန် Text Editor ထည့်သွင်းထားပါသည်။ Myanmar Font မရှိသူများသည် Text Edior Toolbar မှကို နှိပ်ကာ မြန်မာစာရိုက်နိုင်ပါသည်...
Nov 13 2006 Keyboard သွင်းစရာ မလိုပဲနှင့်စာရိုက်နိုင်ပြီ (IE only)
Nov 13 2006 Rich Text Box Default Font is Zawgyi-One
Nov 11 2006 Use Web Embed Font
Oct 09 2006 Fix Rich Text Box Error
Oct 02 2006 Main Page ကို အနည်းငယ်ပြုပြင်ထားသည်။
Sep 29 2006 Rich Text Box ကို အသစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲထားသည်။
Posted by Philip Shield at 4:35 PM No comments:
Posted by Philip Shield at 2:22 PM2comments:
25) ဘ၀ရဲ့ အရည်အသွေးကို ကောင်းစေတာ အသိညဏ်ပဲ၊ ဘ၀ရဲ့ အရည်အသွေးကို ပျက်စီးသွားစေတာ အအသိညဏ် မရှိခြင်းပဲ၊ အသိညဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ သတိရှိမှ ဖြစ်မယ်။ သတိမပါ ညဏ်မပါ&nbsp; ပေါ့ပေါ့တန်တန်လုပ်ပြီဆိုရင် ဘာမှ မရနိုင်တော့ဘူး၊ ဘ၀ရဲ့ အရည်အသွေးတစ်ခုလုံး ကျသွားသည်အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။
Posted by Philip Shield at 11:47 AM3comments:
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုံးက... (၂)
မန်းကျည်းရွက်နုနုလေးများ မြင်လျှင် ပျော်ဘွယ်အိမ်ကို သတိရသည်။ ကျွန်တော်တို့ခြံဝင်းထဲမှာက ဂိုဒေါင်သုံးလုံးရှိသည်။ ဂိုဒေါင်ကြီးတွေ ဘေးမှာ မန်ကျည်းပင်ကြီးတွေ ရှိသည်။ မန်ကျည်းပင် ခုနှစ်ပင် လောက်ရှိမည်။ အငယ် နှစ်ပင်က ကျွန်တော်မွေးပြီးမှ စိုက်ထားတာ။ ငယ်ငယ်တုံးက မန်ကြီးပင်ကြီးတစ်ပင်မှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တက်ပြီး တူတွေ၊ လွှတွေ၊ သံမှိုတွေ၊ သစ်တွေသယ်ပြီး လင့်စင် ဆောက်ခဲ့ဘူးသည်။ ခွဆုံက Triangle ပုံဆိုတော့ ဆောက်လို့လွယ်တယ်လေ။ အဲဒီလင့်စင်က အခုထိတောင် ရှိသေးမလားမသိပါ။ ပျော်ဘွယ် က တော့ တော်တော် ပူပြင်းခြောက်သွေ့သည်။ နွေရောက်လျှင် ပူလိုက်တာမှ ဟပ်နေအောင် ပူသည်။ ဒီမှာ စင်္ကာပူလူမျိုး သူငယ်ချင်းတွေက မေးလို့ရှိရင် ငါတို့မြို့က Texas ကလိုမျိုး ရာသီဥတုရှိတယ် လို့ ပြောပြရတယ်။ အဲဒါမှ သူတို့ကမြင်မှာလေဗျာ။
နွေနှောင်းရက်များ ဆိုလျှင် မန်းကျည်းပင်ကြီးများ တွင် ရွက်ဟောင်းများ ကြွေပြီး ရွက်သစ်များ ဝေလာတတ်သည်။ သင်္ကြန်နားနီးလာ လျှင် ကြက်တူရွေးနှုတ်သီးနှင့် တူသော မန်ကျည်းဖူး နုနုလေးများက ဦးစွာထွက်ပေါ်လာတတ်သည်။ မိုးလေး တစ်ပြောက် နှစ်ပြောက်လောက် ကျလာလျှင် စီစီရီရီ ထွက်နေတဲ့ မန်းကျည်းရွက် နုနုလေးတွေ ကို အိမ်က အလုပ်သမားတွေ ကို တက်ခူးခိုင်းရသည်။ မန်ကျည်းရွက်ဟင်းချို၊ မန်ကျည်းရွက်သုတ်၊ မန်ကျည်းရွက်ငပိ အစပ်ထောင်း၊ မန်ကျည်းရွက်နှင့်ငါးခူချက်၊ မန်ကျည်းရွက်သနပ်၊ စသည်ဖြင့် စုံနေအောင်လုပ်စားကြသည်။ လတ်ဆတ်လို့လားမသိ တော်တော် စားလို့ကောင်းသည်။
အိမ်က ပစောက်ပုံ ပတ်ပတ်လည်အုတ်တံတိုင်း ကာရံထားသည်။ မျက်နှာစာဘက်မှာ ကပျဉ်ကတိုး တိုင်များဖြင့် ခြံစည်းရိုးခတ်ထားသည်။ အဲဒီမျက်နှာစာဘက်ကခြံစည်းရိုးမှာ ဂွေးတောက်ပင် တစ်ပင်ရှိသည်။ ဂွေးတောက်ဆိုတာက နွယ်ပင်မျိုး။ ခြံစည်းရိုးတစ်ခုလုံးမှာ နွယ်တက်နေတတ်သည်။ တခါတရံ ညနေဘက်တွေမှာ ဂွေးတောက်ရွက်နုနုလေးတွေ အိမ်ကလူတွေနဲ့ ၀ိုင်းခူးကြသည်။ ကြက်သား ကို အရည်စပ်စပ် ကာလသားချက်ကလေး ချက်ပြီး ဂွေးတောက်ရွက် နုနုလေးတွေ ခတ်စားရတာ အလွန်အရသာ ရှိပါသည်။
အိမ်က ပွဲရုံလုပ်ငန်းလုပ်သည်။ မိုးလင်းလျှင် ကုန်လာရောင်းသောသူများ၊ ကုန်လာဝယ်သောသူများ ဖြင့် စည်ကား ဆူညံနေတတ်သည်။ ကျနော်တို့အိမ်မှာ Holiday ဆိုတာမရှိ၊ သင်္ကြန်တွင်းကလွဲလို့ နေ့တိုင်း ပွဲရုံဖွင့်ပေးရသည်။ ကျနော်ငယ်ငယ်က ကုန်ချိန်၊ ဈေးဖြတ်၊ ကားတင်၊ ငရုပ်ရွေး၊ ပဲရွေး၊ ကြက်သွန်ရွေး စုံနေအောင် လုပ်ခဲ့ရဘူးသည်။ စာရင်းတွေ လုပ်ကိုင်ကူပေးရသည်။ စာရင်းမှတ်ရသည်။ စာရင်းချုပ်ရသည်။ နေ့စဉ်ငွေစာရင်းချုပ်၊ ဂျာနယ်သွင်း၊ လချုပ်ချုပ် စတာတွေလုပ်ခဲ့ရဘူးသည်။ အလုပ်သမားတွေမရှိလျှင် နှမ်းအိတ် ပဲအိတ်များ ထမ်းခဲ့ရဘူးသည်။ အိမ်က ဆီစက်မှာ ဆီကိုယ်တိုင် ကြိတ်ခဲ့ရဘူးသည်။
ဆီကြိတ်ရာတွင် နေကြာကြိတ်ရတာ အမြန်ဆုံး အလွယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ နှမ်းက နဲနဲ ပိုခက်သည်။ ရေကို အချိန်အဆဖြင့် လိုက်ပေးရသည်။ ဒါမှ နှမ်းတွေက လုံးသွားပြီး ဆီသတ်သတ် နှမ်းဘတ်သတ်သတ်ထွက်မှာ လေ။ ရေမထည့်လျှင် ဆီမထွက်ဘူးလေ။ ရေလုံးဝမ ထည့်လျှင် အမှုန်တွေ တဖွားဖွားနဲ့ ဆီမထွက်ပဲ အမှုန့်ကြိတ်စက်ကြီးလိုဖြစ်သွားတတ်သည်။ မြေပဲ ကအခက်ဆုံး ဖြစ်သည်။ ရေမလိုက်တတ်လျှင် ဆုံထဲတင် ဗွက်ပေါက်နေတတ်သည်။ မြေပဲဆီ ကြိတ်လျှင်အလွန်စိတ်ရှည်ရသည်။
ဆီစက်က အပေါ်မှာ နှမ်းတွေ ပဲတွေ ထည့်တဲ့ ဇလားကြီးရှိသည်။ ဇလားထဲမှာ ဒလက်ကြီးတစ်ခုရှိသည်။ ဇလားထဲက နှမ်းတွေ ပဲတွေက အောက်က လွန်သွားရှိတဲ့ အတွင်းဘက်ထဲကို တရွေ့ရွေ့ ကျသွားသည်။ အတွင်းဘက်ထဲမှာ သံမဏိ လွန်သွား ကြီး၊ အပြင်က သံဘားချောင်းများဖြင့် သံဘာဂျာ သဖွယ် ငုံထားသည်။ လွန်သွားက နှမ်းတွေ ပဲတွေကို Pressure ပေးရင်း ရှေ့သို့တွန်းပို့သွားသည်။ သံဘာဂျာပေါက်တွေ ကြားထဲက ဆီယို ကျလာသည်။ ဆီညှစ်ပြီးသား အဖတ်တွေကို ဆီမကုန်မချင်း ထပ်ကာ ထပ်ကာ ပြန်ကြိတ်ရသည်။ နောက်ဆုံး မာကြော တောက်ပြောင်သော နဘတ်များ ထွက်လာမှ ဆုံချလိုက်ရသည်။
ငရုတ်အကြောင်း ကြက်သွန်အကြောင်း ပြောရအုံးမည်။ ကျနော်တို့ ပျော်ဘွယ်နယ်က ငရုတ် နှင့်ကြက်သွန် အဓိက ထွက်တဲ့ နယ်ဖြစ်သည်။ ဒီနယ်မှာ မိုးလေ၀သ ကောင်းလျှင် ကောင်းသလို ငရုတ်က တနှစ်တနှစ်ကို ပိသာချိန် ဆယ်သန်း၊ သန်းနှစ်ဆယ် လောက်ထွက်သည်ဟု ကြားသည်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ငရုတ်ခြောက်ကို အဓိက ရောင်းဝယ် သည်။ ငရုတ်ဈေးဖြတ်ရတာ အမြင်လွယ်သလောက် တကယ်တမ်းကျတော့ လက်ဝင်သည်။ အစိုအခြောက် အရင် ကြည့်ရသည်။ ဘောက် ဟုခေါ်သည့် အစိုတောင့်များ ရာခိုင်နှုံး မည်မျှပါသလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရသည်။ ဖလံ ဟုခေါ်သော အဖြူတောင့် လေးများ ပါသလား စစ်ရသည်။ ငရုတ်မှည့်ကို ရေနွေးလေးဖျောပြီး ခြောက်နေအောင် လှန်းထားကြသည်။ သို့သော် ရောင်းတမ်း အဆင့်တွင် အစိုဓါတ် ကတော့ အနည်းနှင့် အများ ပါတတ်သေးသည်။ တစ်နေကုန် ငရုတ်သီးတွေ ကိုင်ရတာ ဆိုတော့ ညနေဆိုလျှင် လက်တွေ ပူနေတတ်သည်။ လက်ကို ဆားရည်လေး စိမ်ပြီး အပူသက်သာအောင် လုပ်ရသည်။
Posted by Philip Shield at 5:45 PM2comments:
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က... အဲဒီတုံးက 1995-96 လောက် ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။ ကျွန်တောသည် 1994 လောက်က နယ်မြို့လေး တစ်မြို့မှာ ဆယ်တန်းအောင် လာပြီး ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကြီးမှာ တက်ခဲ့ရသည်။ မိန်း ထဲမှာ ဒဂုံဆောင်မှာ အဆောင်နေခဲ့ဘူးသည်။ ကံကော်၊ ရေတမာ၊ စိန်ပန်းပြာ တို့ဖြင့်အတိပြီးသော မြကျွန်းညိုညို မှာ ကွန်းခိုခဲ့ဘူးသည်။
Programming ဆိုလို့ ပြောရအုံးမည်။ ကျွန်တော်တို့ programming စသင်ရတာ GW Basic ဆိုတဲ့ Language ဖြစ်သည်။ c:\_ မှ command line ဖြင့် ရေးရသည်။ အဲဒီတုံးက ကျောင်းက ကွန်ပျူတာတွေ အများစု က Monochrome တွေဖြစ်သည်။ Monochrome ဆိုသည်မှာ screen မည်းမည်း ပေါ်မှာ စာလုံးစိမ်းစိမ်းလေးတွေ ပေါ်သောကွန်ပျူတာများ ကို ခေါ်တာပါလားဟု မှတ်ထားခဲ့ဘူးသည်။ နောက် တစ်နှစ်လောက် ကျမှ ကျောင်းက "C" -(စီ) သင်ပေးသည်။ Pascal သင်ပေးသည်။ အဲဒါတွေသင်ပေးပြီးတဲ့ နောက် Object Oriented Language ဆိုတာ သင်ပေးသည်...C (စီ) ကနေ C++ (စီ ဒ-ဘယ် ပလပ်စ်) သင်ရတာပေါ့။ Class တွေ၊ Method တွေ၊ Inheritance တွေ Encapsulation တွေ Polymorphism တွေဖြင့် ချာချာလည်ခဲ့ဘူးသည်။ နောက်တော့လည်း ရသွားတာပေါ့။
မှတ်မိသေးသည်... ကျောင်းမှာ စက်ခန်းဝင်လျှင် အဘ ကိုကြောက်ရသည်။ အဘက Windows ကိုင်တာမြင်ရင်မကြိုက်။ Windows ကိုင်နေတာ မြင်လျှင် စာမလုပ်ပဲ ဆော့နေသည် ဟု အယူရှိပုံ ရလေသည်။ စက်ခန်းထဲမှာ Windows Operating System ရှိသော စက် နှစ်လုံး သုံးလုံးလောက်ရှိမည် ထင်သည်။ c:\_ ကနေ Window လို့ ရိုက်မှ Window က တက် တက်လာ တတ်သည်။ အဲဒီတုံး က Windows ရှိသော စက်ကို ဦးရသည်။ Windows version 3.11 ဖြစ်ပါသည်။ တချို့ သူငယ်ချင်းတွေ ဆိုလျှင် စက်ခန်းဝင်လို့ Windows ရှိတဲ့ စက်ကိုင်ရလျှင် မိမိကိုယ်ကို အလွန်ဂုဏ်ယူ ကြသည်။
အိမ်ကို ကွန်ပျူတာ ၀ယ်ပေးဘို့ ပူဆာ ဖူးသည်။ အဲဒီတုံးက ကွန်ပျူတာ "Intel-486" တစ်လုံးဝယ်တာ ၁ သိန်းခြောက်သောင်း လောက် ပေးခဲ့ရသည်။ Intel-486 ဆိုတာက အခု Intel-Pentium မျိုးဆက်ထက် မျိုးဆက် နှစ်ဆက် သုံးဆက်လောက် ရှေ့ရောက်သည်။ အဲဒီခေတ်က ဗင်ကား တစ်စီးကို ၄ သိန်း ငါးသိန်းကျပ် လောက်ပဲရှိသည်။ ဒါပေမယ့် အိမ်က ၀ယ်ပေးပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်စမ်းချင်တာတော့ စမ်းလို့ရပြီ ဆိုပြီး အလွန်ပျော်ပါသည်။ ကျွန်တော် အဲဒီကွန်ပျူတာလေး ကို အလွန်ချစ်ပါသည်။ ကျနော်နှင့် နှစ်အတန်ကြာအတူ အိပ်ခဲ့ရသော ကွန်ပျူတာလေးဖြစ်သည်။ နယ်ကိုပြန်ရင်လည်း သူ့ကို ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူ သယ်သွားခဲ့သည်။ သြော် အခုတော့လည်း...
တခုပြောရ အုံးမည်။ အဲဒီတုံးက မီးမပျက်ပါ။ ဆယ်တန်းပြီးကတည်းက ရန်ကုန်မှာ ကျနော်နေခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မှာ မီးအရမ်း ပျက်ခဲသည်။ အခု ကလေးတွေ ရန်ကုန်မှာ မီးမပျက်ပါလို့ ပြောလျှင် ညာနေတာ လို့ထင်လိမ့်မည်။
ဒီလိုနဲ့ ရန်ကုန်မှာ နေရင်းနေရင်းနဲ့ နှစ်လေးနည်းနည်းကြာတော့ မီးက နဲနဲ လေး နဲနဲလေး စစပြီး ဖောက်ဖောက်လာသည်။ ကိစ္စ မရှိသေး။ အလုပ်တော့လုပ်လို့ရသေးသည်။ ကွန်ပျူတာလေးတော့ ကိုင်လို့ရသေးသည်။ Program လေး ဘာလေးရေးလို့ ရသေးသည်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကြာလာတော့ နွေရာသီတွေဆိုလျှင် လုံးလုံးအမှောင်ကျသွားသည်။ အမှောင်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ ကျင်လည်ခဲ့ရသည်။ မီးမရှိပေမယ့် မီးစက်လည်း မနှိုးနိုင်ဘူးလေ။ မီးစက်ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ ရှိရင် ၀ယ်နိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ် ဆီဘိုး ကဈေးကြီးတယ်လေ။ အဲဒါနဲ့ အင်ဗာတာလေး တစ်လုံး ၀ယ်ထားရသည်။ နေ့အိပ်ပြီး ညမှ ထထပြီး အလုပ်တွေ လုပ်ရသည်။ ရေ ထ တင်ရသည်။ ဒါမှ နောက်နေ့ အိမ်သာသုံးဖို့ ရေချိုးဖို့ ရေရှိအောင်လို့။ မီးက လူတွေအိပ်ချိန် ၁၂ နာရီ ကြရင်လာတတ်တယ်လေ။ ၄နာရီလောက်ကြရင် ပြန် ပျက်သွားပြီ။
ကျွန်တော် နဲ့ သူငယ်ချင်းက စင်္ကာပူက ဆရာသမား တစ်ယောက်နှင့် အဆက်အသွယ်ရလို့ မြန်မာပြည်မှာ Program တွေ ရေးရေးပြီး စင်္ကာပူကို ပို့ပို့ပေးရတယ်။ ရက်ဆိုင်းလို့ မရဘူး လေ။ ဒီမှာ က သူ့ Schedule နဲ့ သူကိုး။ ကျွန်တော်တို့မှာက လဲ အမှောင်ကြီးထဲမှာလေ။ နေ့အိပ်ပြီး ညမှ ထထပြီး အလုပ်တွေ လုပ်ရသည်။ ဒီလိုနဲ့ နေ့အိပ် ညလုပ် နဲ့ ကြာတော့ လူတွေက ကြောင်စီစီတွေဖြစ်လာကြသည်။
Posted by Philip Shield at 6:08 PM2comments:
အိမ်ချမ်းမြေ့ ၏ ချစ်သူ့အိမ်
ကျောက်စရစ်ခဲလေးတွေ ခင်းတဲ့ လမ်းလေးထဲမှာ ချစ်သူရဲ့အိမ်လေး ရှိတယ်။ အဲဒီ လမ်းလေး တဖက်တချက်မှာတော့ ၀ါးရုံပင်တန်းလေးတွေ၊ ညနေစောင်းပြီဆိုရင် ချစ်သူနေတဲ့ လမ်းလေးထိပ်ကပုဇွန်ကွက်ကျော်သုတ်ဆိုင်၊ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်၊ ကြံရည်ဆိုင်လေးတွေမှာ လူစည်ကားတတ်တယ် ။ မီးရောင်လဲ့လဲ့ စာအုပ်အငှားဆိုင်လေးတွေ၊ ဆိုက်ကားသံတွေနဲ့လဲ အသက်ဝင်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ချစ်သူနေတဲ့ လမ်းလေးထဲမှာကတော့ လူခြေတိတ်ဆိတ်နေတတ်တယ်။
ချစ်သူရဲ့ အိမ်ပတ်ပတ်လည်မှာ သရက်ပင်တွေ၊ မန်ကျည်းပင်တွေ တန်းစီနေတယ် ။ တခါတရံ သရက်ကင်းလေးတွေက လမ်းလေးပေါ်ကို ကျနေတတ်တယ်၊ ပြူတင်းပေါက် ဖြူဖြူလေးတွေမှာ ကန့်လန့်ကာ အပြာလေးက လေမှာ လွင့်နေတတ်တယ်။ ခြံဝင်းလေးကတော့ သစ်ရွက်တွေ ကင်းစင်လို့ အမြဲတမ်း ပြောင်စင်နေတတ်တယ်။ ခြံလေးရဲ့ထောင့်မှာ အရိပ်ကောင်းတဲ့ ရေတွင်းလေးနဲ့တွဲရရွဲကျနေတဲ့ သစ်ခွပန်းတွေရှိတယ်၊ညနေစောင်းတွေမှာ ခြံဝင်းလေးထဲမှာ တခါတရံ ချစ်သူ တံမြက်စည်းလှဲနေတာကို ပုဏ္ဍရိတ်ပင်တွေကြားက မြင်ရတတ်တယ်။ ချစ်သူကို ချစ်မိသွားတဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာ အဲဒါတခုလဲပါတယ်။ တခါတရံ တံမြက်စည်း လှဲပြီးသား သစ်ရွက်ခြောက် လေးတွေကို မီးရှို့နေလို့မီးခိုးငွေ့တွေ ဟိုးဝါးရုံပင်ထိပ်ဖျားကို လွင့်တက် သွားတယ်။ တခါတရံတော့လဲ ချစ်သူက သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင် ရောက်နေလို့ ချစ်သူမရှိတဲ့ အိမ်လေးကို အဲဒီတော့မှ ရဲရဲဝင့်ဝင့် ကြည့်မိတယ်။ ယောင်္ကျားလေးတွေ အများကြီးရှိတဲ့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင် ဆိုတော့ ချစ်သူရှိနေမလားလို့ လှမ်းမကြည့်ရဲလို့ သူငယ်ချင်းတွေကို အကူအညီတောင်းတော့လဲ အားမကိုးရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက နင်ကြည့်ပေးလိုက်၊ ငါလဲမကြည့်ရဲဘူး။ နင်ကြည့်ပါလား ဆိုပြီး သူကြည့်ငါကြည့်နဲ့ သူတို့ အချင်းချင်း ငြင်းခုံနေခဲ့ကြသေးတယ်။မိုးအုံ့နေတဲ့ ညနေလေး တခုမှာတော့ ချစ်သူခြံဝမှာထွက်ရပ်နေတယ်။ သူငယ်ချင်းမတွေရဲ့ လှပနက်မှောင်တဲ့ ဆံကေသာတွေနောက်မှာ ပုန်းကွယ်ရင်း နောက်ပြန်လှဲ့ကြရင်ကောင်းမလားလို့ ချီတုံခြတုံ ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ကချင် ပုဆိုးကွက်နဲ့ ချစ်သူက ခေါင်းငုံ့ပြီး မြေပေါ်ကတစုံတရာကို(သို့) ဘာမှမရှိတာကို ဖိနပ်ဦးနဲ့ တို့ကစားနေတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့လူ တယောက်ရှေ့က ဖြတ်လျှောက်ရတာ တော်တော်ခက်တဲ့ အလုပ်တခုဆိုတာ အဲဒီနေ့က သိခဲ့ရတယ်။ ချစ်သူရဲ့မျက်လုံးက အားလုံးထဲမှာမှ ကိုယ့်ဆီရောက်လာတယ်။ ရိုလ်းနံပါတ် နှစ်မဟုတ်လားတဲ့၊ ကျွှန်တော်“ . . . ” ပါတဲ့၊ တအုပ်လုံးကြီးက ခေါင်းငြိမ့်ကြတယ်။ ဒါ ကျွှန်တော့အိမ်ပါတဲ့၊ တအုပ်လုံးက တခါ ခေါင်းထပ်ငြိ်မ့်ကြ ပြန်တယ်။ အားတဲ့အခါ လဲလာလည်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ အားလုံး ခေါင်းတွေ ငြိမ့်ကြပြန်ရော။ အဲဒီညနေက ခေါင်းငြိမ့်တဲ့ အလုပ်နဲ့ပဲ ပြီးသွားကြတယ်။ချစ်သူအတွက် ကဗျာလေးတွေကို စွယ်တော်ရွက်လေးတွေပေါ်မှာ စပ်ဖူးတယ်။ ချစ်သူနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက် သူအတွက် စပ်ထားတဲ့ကဗျာတပုဒ်ကို ချစ်သူကို လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးလိုက်ရတယ်။ ချစ်သူ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အရပ်ပုပု ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ ကောင်မလေးကို ပေးဖို့အတွက်ပေါ့။ သူငယ်ချင်းမတွေကတော့ နှစ်မျောတသနဲ့ မြည်တွန်တောက်တီး နေခဲ့ကြတယ်။နှစ်တွေအကြာကြီးမှာ ချစ်သူရဲ့အိမ်လေးရှေ့ကို တခါပြန်ရောက်တယ်။ အရင်လိုပဲ သစ်ရွက်တွေ ရှင်းလင်းပြီးစ ခြံဝင်းလေးက သန့်ရှုင်းနေတယ်။ ချစ်သူကို တံမြက်စည်းလေးကိုင်လို့ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ချစ်သူဘေးမှာ ဂါဝန်အ၀ါလေးနဲ့ ပါးဖောင်းဖောင်း ကလေးလေးတယောက်က သရက်သီးလေး ကိုင်လို့ ရပ်ကြည့်နေတယ်။ သစ်ရွက်ပုံလေး နားမှာတော့ အရပ်ပုပု ဆံပင်ကိုတပတ်လျှိုတွဲချထားတဲ့ မိန်းကလေးတယောက်။ ချစ်သူတို့မိသားစု လုပ်လက်စ အလုပ်တွေကို ထားပြီး အိမ်ပေါ်မှာ သစ်သီးမျိုးစုံနဲ့ ဧည့်ခံကြတယ်။ညမီးလေးတွေ လက်လာတော့ ခြံဝအထိ ချစ်သူက လိုက်ပို့တယ်။ နင့်ရဲ့ ကဗျာတပုဒ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ချစ်သူကပြောတယ်။ ညလေအတိုးမှာ ၀ါးရုံပင်တွေတရှဲရှဲမြည်သွားတယ်။ချစ်သူအိမ်ကို ကျောခိုင်းလျှောက်နေပေမယ့် ချစ်သူကိုယ့်ကို ခြံဝက ရပ်ကြည့်နေဆဲပဲဆိုတာ သိနေခဲ့တယ်။ဒါပေမယ့်လေ...ချစ်သူရှေ့မှာ လမ်းလျှောက်ရတာ သိပ်ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်တခုတော့ မဟုတ်တော့ပါ။
အိမ်ချမ်းမြေ့ ၏ ချစ်သူ့အိမ် ကို ဝေငှခံစားစေလိုသော စေတနာဖြင့် ထပ်ဆင့်ကူးယူတင်ပြပေးပါသည်: http://ainchannmyay.blogspot.com/
Posted by Philip Shield at 9:44 AM No comments: